Booliska oo bandow kusoo rogay muqdishu - HOBYOMEDIA
Home Uncategorized WARARKA MAANTA Booliska oo bandow kusoo rogay muqdishu
Booliska oo bandow kusoo rogay muqdishu
Taliska ciidamada Booliska Soomaaliyeer ayaa shaaca ka qaaday in laga bilaabo caawa 9:00 fiinimo bandow lagu soo rogay magaalada Muqdisho, kaas oo ku eeg aroorta hore ee subaxnimada Isniinta ah.
Afhayeenka Booliska Soonaaliyeed oo la hadlay warbaahinta ayaa farriin u diray shacabka, wuxuuna ugu baaqay inay deganaan muujiyaan, isla-markaana ay dul qaataan inta ay dhaceyso doorashada madaxweynaha.
Sidoo kale wuxuu ugu baaqay inay soo adeegtaan, isla-markaana ay guryahooda ku nagaadaan, inta ay xiran yihiin waddooyinka.
“Shacabka ha adeegtaan xili hore magaalada Mudisho waa bandow lga bilaabo caawa Sadex Saac ilaa Lixda Ama Labo iyo Tobanka Subaxnimo ee isniinta” ayuu yiri afhayeenka.
Doorashada madaxweynaha ayaa dhaceysa beri oo Axad ah, kuna beegan 15 ka bishaan May, iyada oo loola adag loo geli doono xilka madaxweynaha.
Previous articleMusharax kale oo U Tanaasulay Cabdiraxman Cabdishakuur
Next articleMusharixiinta ugu Cadcad beri ku Loolami Doona Xilka madaxweynaha 10aad ee soomaaliya(Akhriso)